Testimonials at The SPACE Language Academy
“မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မကတော့ ထက်ထက်ယုနွယ်ပါ။ Company ဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါရှင့်။ The SPACE Language Academy မှာ Business English Course ကို တက်ရောက်နေပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ အထိအတွေ့ များလာရတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားက အင်မတန်အရေးပါလာပါတယ်။ The SPACE Language Academy ရဲ့ Business English Course လေးက ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ အင်မတန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအတန်းလေးကို တက်ပြီ ကျွန်မရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သိသိသာသာတိုးတက်လာတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီသင်တန်းလေးက တက်ရောက်သူတိုင်း စိတ်ကျေနပ်ပြီး မိမိတို့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိမယ့် သင်တန်းလေးတစ်ခုလို့ အပြည့်အဝထောက်ခံချင်ပါတယ်ရှင့်။”
“Mingalapar, I’m Htet Htet Yu Nwel. I’macompany officer. I’m joining Business English Course at the SPACE Language Academy. Nowadays, in most business communication, the common medium has become English, giving communicative skills in English beingamajor role in career success. The Business English course at the SPACE covers both communicative skills and language skills which aidalot in our everyday communication. After I’ve joined this class, my English has remarkably improved. I heartily recommend this course and you will find it satisfying and very useful in your career.”
Htet Htet Yu Nwe
“ကျွန်တော် အောင်ပြည့်ဖြိုးပါ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ။ The SPACE Language Academy မှာ Business English Level 1 တက်ပြီး အခု level2ဆက်တက်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။ ဒီအတန်းလေးတက်ပြီး language skill သာမက professional skill တွေပါ သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါတယ်။ ဥပမာ email ရေးရာမှာ ပိုပြီး စနစ်ကျလာတယ်။ formality ကို ပိုပြီးနားလည်လာတယ်။ business vocabulary တွေကို သိရုံသာမက လုပ်ငန်းခွင်မှာ လက်တွေ့ အသုံးပြုတတ်လာတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ confidence ပိုရှိလာတော့ အထက်လူကြီး နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ communicate လုပ်ရတာ သိသိသာသာကို ပိုပြီး အဆင်ပြေလာပါတယ်။ ဒီသင်တန်းလေးက သင်တန်းကြေးကလည်း ဝန်ထမ်းတွေအတွက် affordable ဖြစ်တယ်။ အတန်းချိန်တွေကရုံးချိန်လွတ်မို့ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်။ နေရာကလည်း မြို့လယ်ခေါင်မှာဆိုတော့ သွားရလာရ အင်မတန်အဆင်ပြေလို့ အားလုံးကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူတွေအတွက် တကယ်ကို တက်သင့်တက်ထိုက်တဲ့ သင်တန်းလေးပါ။”
“I am Aung Pyae Phyo and I work forabank. I have finished Business English level 1 at the SPACE Language Academy and I am waiting to join level2now. I have significantly improved not only my language skills but also my professional skills after joining the course. For example, I’ve become more systematic in email writing. I’ve become more familiar with formality in business interactions. I’ve learned to use business vocabulary in real life situations rather than just having the knowledge of them. I’ve become more confident in speaking English, which helps me easier to communicate with my foreign superiors. The course fees are also affordable for staff. The schedules of the classes also suit the working personnel as they are out of the office hours. The location is also in downtown, so it is really easy to get to. For all those reasons, I’d like to invite you all to join us at the SPACE Language Academy.”
“ကျွန်မကတော့ စန္ဒီလှမြိုင် ပါ။ Telecom company မှာ အခုလက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ The SPACE Language Academy မှာ Business English Level 1 တက်ပြီး အခု Level2ဆက်တက်နေပါတယ်။ ဒီအတန်းလေးတွေတက်ရင်း သိသိသာသာတိုးတက်လာတာကတော့ listening skill နဲ့ speaking skill ပါ။ Business ဝေါဟာရတွေ တော်တော်လေးပိုသိလာပြီး grammar knowledge လည်း ပိုတိုးတက်လာပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတွေ ဖတ်တော့လည်း ပိုပြီးနားလည်လာတယ်။ စာဖတ်တာလည်း ပိုမြန်လာပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကျောင်းက ထောက်ပံ့ ပေးတဲ့ facilities နဲ့ တီချယ်တွေရဲ့ teaching skill ကိုကြိုက်တဲ့ အတွက် နောက် level တွေလည်း ဆက်တက်သွားမှာပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို Professional ကျကျကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ The Space မှာ တက်ရင် ယခုထက် ပိုမို တိုးတက်လာမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံးကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။”
“My name is Sandi Hla Myaing and I’m working foratelecom company. I’ve finished Business English level 1 and I am joining level2at the moment. After attending those classes, I notice I have obviously improved listening and speaking skills. I have got to know more business terms and expressions, and my grammar knowledge has improved too. I’ve become more proficient in reading in English. I really like the facilities provided here and the teaching skills of the teachers here at the SPACE Language Academy, so I will definitely join the next levels . I need to use English professionally in my workplace and I believe that I will improve my English much more if I go on joining the SPACE Language Academy. That’s why, I would love to invite everyone to the SPACE Language Academy.”
Sandi Hla Myaing
“ကျွန်မနာမည် မမြတ်သီရိအောင်ပါ။ Import & Export company တစ်ခု မှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ The SPACE Language Academy မှာ Business English Level 1 တက်ပြီး အခု level2တက်နေပါတယ်။ Level 1 ပြီးလို့ level2ဆက်တက်ဖြစ်ပုံက ဒီကျောင်းက တီချယ်တွေ စာသင်တာအရမ်းကြိုက်တယ်။ ကျောင်းက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ service နဲ့ provide လုပ်ပေးတဲ့ facilities တွေကိုလည်း အရမ်းသဘောကျတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆက်တက်ဖြစ်တာပါ။ ဒီ Business English အတန်းလေးက လုပ်ငန်းခွင်မှာ တကယ်အသုံးဝင်ပြီး အင်မတန်အကျိုးရှိပါတယ်။ ကျောင်းကသုံးတဲ့ Business Plus (Cambridge) စာအုပ်လေးက Asians တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားတာမို့ ကိုယ်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တကယ်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ Business Culture Lessons တွေလည်းပါတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ communicate လုပ်လို့ ပိုအဆင်ပြေလာတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင် သဘောတရားတွေ ပိုသိလာတော့ အမြင်ကျယ်လာစေပါတယ်။ English skills အကုန်လုံး သိသိသာသာတိုးတက်လာလို့ အားလုံးကို လာတက်စေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။”
“My name’s Myat Thiri Aung and I work for an import and export company. I amastudent from Business English level2class at the SPACE Language Academy and I have also finished level 1. The reason I joined level2after level 1 is that I really love the teaching styles of the teachers at the SPACE Language Academy. I’m also satisfied with the service of the staff and the facilities they provide. This Business English class is really effective for my job. The Business English course book used at the SPACE, Business Plus (Cambridge) is specially designed for Asians, so it is really handy for us. We also learn business cultures asalesson, so we become more competent in dealing with foreigners. As we’ve learnt more about international businesses and their nature, we broaden our knowledge and skills. Since I experience progress in my English skills, I would like to invite you all to join the SPACE Language Academy.”
Myat Thiri Aung